सुनचाँदीको मुल्य तोलाको कति ? | सुनचाँदीको मुल्य तोलाको कति ? |
सुनचाँदीको मुल्य तोलाको कति ?
उज्यालो प्रतिनिधि १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार अर्थ
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन शुक्रबार घटेर ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बिहीबार तोलामा ११८० रुपैयाँ प्रतितोला रहेको चाँदी शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... ६ अर्ब बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी